I-Smartee yeWindows PC, ikhompyuter encinci esebenza kakhulu [UKUHLAZIYA] | Iindaba zeGajethi
I-PC ye-Smartee yeWindows, ikhompyuter encinci esebenza kakhulu [UKUHLAZIYA]
Namhlanje sikuzisa olunye uphononongo lwenye indlela enomdla ukuze ube ne-miniPC ekhaya. Sithetha ngendlela engenakuba yenye ye-Smartee Windows PC enikezelwa ngophawu lwe-SPC. Le khompyuter incinci ineemfihlo ezimbalwa, kwaye iyakwazi ukuba yindawo yethu yolonwabo kunye nemultimedia ukusukela kusuku lokuqala. Ukongeza, iimpawu zayo kwinqanaba lezixhobo ezinokwenza ukuba ibenomdla ngakumbi ukuba sibeka iingqondo zethu kuyo kwaye sisebenzisa kakhulu iiWindwos 10. Ke ngoko, Sifuna ukukuxelela iimfihlelo zale Smartee Windows PC, kwaye uhlalutye ngononophelo ukuba le khompyuter incinci ibeka i-SPC ekhayeni lakho ngexabiso elincitshisiweyo kufanelekile.
Ke ngoko, siza kuhlalutya nganye nganye kwezona ndawo zinamandla nezona zibuthathaka zale Smartee Windows PC ngenjongo yokucacisela abafundi bethu, nokuba ingaba le yeyona nto iyinyani na kwamanye amaziko emultimedia kunye nee-miniPC ezikhoyo emarikeni. Intengiso.
1 Iimpawu zobugcisa kunye neenkcukacha
2 Uyilo lwesixhobo kunye nokuphatheka
3 Isoftware kunye nokuzonwabisa
4.1 Uluvo lomhleli
Iimpawu zobugcisa kunye neenkcukacha
Akufuneki ukuba sithethe, kufuneka siqale ngenani elipheleleyo, kwaye loo nto kukuba iSmartee ene-processor yamandla asezantsi ye-Intel Atom, ikhatshwa 2GB yememori ye-RAM. Ingangabonakali njenge-a priori eninzi, nangona kunjalo, iya kubonisa ngaphezulu ngokwaneleyo kwinjongo eyenzelwe yona. Kuya kufuneka sikhumbule ukuba sijamelene nesixhobo esenzelwe ukwenza imisebenzi esisiseko enje nge-automation yeofisi, imidlalo ekumgangatho ophantsi kwaye ngaphezulu kwako konke, ukusebenzisa umxholo wemultimedia.
Ngokunxibelelana, kwi-PC yeSmartee siza kufumana uqhagamshelo Bluetooth 4.0 ethembisa ukusetyenziswa kancinci kulo naluphi na uluhlu, ikhadi lomnatha elinonxibelelwano WiFi I-802.11 b / g / n iyahambelana nayo nayiphi na i-router kwintengiso kunye nonxibelelwano ethernet (RJ45) yeyona nto ifunwa kakhulu yinethiwekhi. Kufuneka sitsho ukuba ikhadi lenethiwekhi liza kuphatha kuphela inqanaba lokudluliswa kwedatha ye-100 Mbps.Inyani kukuba iya kuba ngaphezulu ngokwaneleyo, kodwa besingazithanda iinkcukacha zokubandakanya ikhadi elihambelana nesantya esihambelana ne-fiber optics namhlanje usuku.
Ngoku siyaqhubeka nokugcina, Sine-32GB iyonke yememori yefleshi, ukuba isaphulelo kwisithuba senkqubo yokusebenza siya kuba nesimahla i-20GB. Nangona kunjalo, kufuneka sichaze ukuba ine-slot ye-microSD eya kusivumela ukuba sibandakanye ikhadi eliya kuthi ga kwi-64GB, enikezela ngobuninzi obudibeneyo be-96GB yokugcina ngokupheleleyo.
Okokugqibela siya kuba nayo 2 izibuko ze-USB ezakudala, a microUSB OTG, igalelo le HDMI 1.4 Kunye nonxibelelwano lweaudiyo yakudala I-3,5 jack iimilimitha. Kufuneka sitsho apha ukuba uphoswa sisandi sedijithali sesona sinxibelelanisi siviyo. Kuyinyani ukuba sinokuyifumana nge-HDMI, kodwa uqhagamshelo lweaudiyo ye-optical luxhaphake kakhulu namhlanje kwaye ayisisixhobo esiza kwenza isixhobo sibize kakhulu.
Uyilo lwesixhobo kunye nokuphatheka
Isixhobo, iApple TV, iya kuza ngokukhawuleza engqondweni, kwaye badideka ngokulula. Elingelilo kwaphela inqaku elibi lesi sixhobo. Inoyilo lwesikwere kunye neekona ezijikeleziweyo, ezincinci, ezincinci kwaye zintle kakhulu ezingayi kubonwa nakweliphi na igumbi lokuhlala. Yintoni egqithisile, ubungakanani busikhuthaza ukuba sibubeke nakweyiphi na ishelufu okanye ngasemva komabonakude okanye iliso esiza kulisebenzisa, ngale ndlela, siyaqinisekisa ukuba ayithathi ndawo kakhulu.
Ukuyinika amandla, iya kuthi iqhagamshele ngqo ekukhanyeni ngentambo yombane. Bekuya kuba kuhle ukusebenza ngentambo ye-microUSB okanye nge-USB ukuya kwi-TV, kodwa siyaqonda ukuba amandla kunye neempawu ziyayithintela, ukongeza, ayongezi kubungakanani besixhobo, intambo ilungile kwaye siya kuyibeka ngokulula ngaphandle kokuqaphela. Kwicala elingaphambili siza kufumana kuphela iqhosha lamandla, ngoko ngokuqinisekileyo singatsho ukuba uyilo lwale Smartee Windows PC lusenze saqiniseka kwaphela.
Isoftware kunye nokuzonwabisa
Kufuneka sihlale sikhumbula ukuba sijongane nesixhobo esine-2GB ye-RAM, nangona yonke inkqubo ihlaziyiwe ukuza kuthi ga ngoku, ihamba ngcono kakhulu kunokuba besinokucinga. Kodwa yenzelwe kwaye idle umxholo. Sivavanye ngeNetflix, iMovistar + kunye nezinye iintlobo zokusasaza imithombo yeendaba kwaye khange iveze ngxaki
Ukusebenza kweMizobo kunokubandezeleka ngokusasaza ngqoUmzekelo, iBeinSports inokubangela iingxaki ezinzulu ukuba sisebenzisa kakubi le MiniPC, nangona kunjalo, kuyo yonke imisebenzi yemihla ngemihla iya kubonisa ngaphezulu ngokwaneleyo, enye indlela ekhethekileyo.
Ungamfumana I-Smartee yeWindows PC kwiAmazon ukusuka kwi-105 euros kuhamba LONTO, okanye ngokuthe ngqo kwiwebhusayithi ye-SPC kwenye le LINK.
I-Smartee yeWindows PC
Akukho audio yedijithali
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Reviews » I-PC ye-Smartee yeWindows, ikhompyuter encinci esebenza kakhulu [UKUHLAZIYA]
Ndakhe ndayibona phi lonto?
Udidekile kwizivakalisi ezininzi kunye nopelo. Phucula upelo lwakho kwiWindows.
Iprototype yeTesla Model 3 yokuqhuba kuhola wendlela we-SpaceX Hyperloop eHawthorne
Umqhubi we-AT & T uya kunika i-WiFi yasimahla kwimetro yeSixeko saseMexico